रेडियो ताप्लेजुङ यो कसको सरकार हो ?
तिमीले भन्ने गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना झुटको पुलिन्दा मात्र हो त सरकार ? तिमीले देखेको समृद्धिको सपना भित्र निर्मला पन्तहरूको सुरक्षा छ कि छैन ? तिम्रो समृद्धिका सपनाहरू देश र जनताकै लागि हुन् भने न्याय मर्न नदेऊ । तिमीबाट नै न्याय पाउँछु भनेर भर गरेकाहरूले तिम्रो विकल्प खोज्नु नपरोस् । यसैमा सरकारको र लोकतन्त्रको हित निहित छ । स्रोत ः प्रदेश पोर्टल